China anemibala insimbi amashidi Ukwakha futhi Factory | I-Huaxiao
Amashidi ensimbi angenambala
Ikhwalithi ephezulu Wuxi isigayo ukuthekelisa SUS 304 stee engagqwali ...
Ishidi lensimbi elingenalutho elinempahla entsha lenziwa ngokwelashwa kwamakhemikhali ebusweni bensimbi engagqwali. Imikhiqizo eyinhloko ibhodi lensimbi engagqwali yensimbi kanye nensimbi engagqwali ishidi lokuhlobisa. Insimbi engagqwali enemibala yenza ukucubungula kwezobuchwepheshe nobuciko kushidi lensimbi engagqwali, okuyenza ibe yinsimbi engagqwali yokuhlobisa enemibala ehlukahlukene ebusweni.
Umthamo weSino Stainless Steel mayelana namaSpredishithi Wensimbi Engagqwali
Ibanga: 304, 201,430,
Ubukhulu: 0.3mm - 4.0mm
Ububanzi: I-1000/1219 / 1500mm noma eyenziwe ngezifiso
Ubude: 6000mm / ikhoyili
Ifilimu: PE kabili / laser PE
rose amashidi ensimbi angenasici,
amashidi ensimbi angenasici,
ikhofi igolide insimbi amashidi,
amashidi wensimbi engagqwali,
iwayini elibomvu insimbi engamashidi,
amashidi ensimbi engagqwali,
amashidi ensimbi aluhlaza okotshani,
amashidi ensimbi ansomi,
amashidi ensimbi amnyama
amashidi wensimbi aluhlaza okwesibhakabhaka,
Amashidi ensimbi angenasinakha,
titanium camera insimbi engagqwali,
Insimbi engagqwali yeTi Coloured
Incazelo elula ngamaSpredishithi Wensimbi Engagqwali
Izinzuzo zombala wensimbi engagqwali onemibala
Umbala wayo utholakalela ukukhanya okusagolide, okuphuzi, okuphuzi okusagolide, okwesibhakabhaka okuluhlaza okwesibhakabhaka, izibhamu ezingekho emthethweni, umbala, onsundu, umbala omncane, igolide le-zirconium, ithusi, i-pink, i-champagne nezinhlobonhlobo zeshidi lensimbi elingenansimbi elinemibala ngeminye imibala. Ishidi lokuhlobisa lensimbi elingenasici linezinzuzo zokumelana nokugqwala okuqinile, izakhiwo eziphezulu zemishini; ubuso bombala buqhubeka isikhathi eside futhi abupheli, umbala uyashintsha nge-engeli yethoni ekhanyayo, njll. Futhi, ungqimba olungaphezulu olunemibala lwensimbi yokuhlobisa insimbi engagqwali luyizinga lokushisa elingamelana no-200 "'futhi ukumelana nalo usawoti kanye nesifutho kungcono ukwedlula insimbi engagqwali ejwayelekile, ukumelana okuhle kokugqoka nokusebenza kokuqala kulingana nokusebenza kocwecwe lwe-foil oluhlanganiswe negolide.
Ukwethulwa kokucutshungulwa kombala kwishidi lensimbi engagqwali
Inqubo yokukhiqizwa kweshidi lensimbi elingenasici ayigcini nje ngokufakwa ungqimba lwama-ejenti ombala ebusweni bensimbi engagqwali, engakhiqiza imibala ecebile nenempilo, kepha kutholakala ngezinqubo eziyinkimbinkimbi kakhulu. Njengamanje, indlela esetshenziswayo ukufaka umbala we-acid bath oxidation, okwenza ungqimba osobala wamafilimu amancane we-chromium oxide ebusweni bensimbi engagqwali, ezokhiqiza imibala ehlukene ngenxa yobukhulu befilimu ohlukile lapho ukukhanya kukhanya ngaphezulu. Ukucutshungulwa kombala kwensimbi engagqwali kufaka ukufakwa kwe-shading nokwelashwa kwe-matura izinyathelo ezimbili. Ukufiphaza kwenziwa endaweni eshisayo yesisombululo se-chrome sulfuric acid lapho insimbi engagqwali icwiliswa; izokhiqiza ungqimba lwefilimu ye-oxide ebusweni obubanzi bayo bungu-1% obukhulu bezinwele. Njengoba isikhathi sihamba futhi ukushuba kukhuphuka, umbala wensimbi engagqwali uzoshintsha njalo. Lapho ubukhulu befilimu i-oxide busukela ku-0.2 microns kuye ku-0.45 m, umbala wengubo engagqwali izokhombisa okuluhlaza okwesibhakabhaka, igolide, okubomvu nokuhlaza. Ngokulawula isikhathi sokungena, ungathola ikhoyili yensimbi engagqwali yombala oyifunayo. Ngemuva kokucutshungulwa okungaphansi, i-cathode, i-chromium oxide, namanye ama-compounds azinzile angenziwa. Ayigcini ngokugcwalisa ama-pores amancane kwifilimu ye-oxide kepha futhi ithuthukisa ukumelana nokugqoka, ukumelana nokugqwala kanye nokumelana nokushisa kwefilimu ye-oxide, okwenza ukusebenza kukonke kwendaba kuthuthuke kakhulu.
Ishidi lensimbi elingenasici lisetshenziswa kakhulu emikhakheni eminingi.
Ukumelana nokugqwala nokugqokwa kokumelana nomkhiqizo wensimbi engagqwali onemibala kunamandla kunensimbi engagqwali ejwayelekile, engamelana neminyaka engaphezu kweshumi kasawoti wokufafaza usawoti kanye nokuqhamuka kombala iminyaka engaphezu kwengu-30 ku-UV irradiation. Umzimba omkhulu uhlangana nongqimba wokufaka imibala, ugcine ukwakheka okuyisisekelo nokusebenza kwensimbi engagqwali yasekuqaleni, engacubungula ukubumba okuvamile nokwelula ukwakheka. Ubuso bombala bufakwa ngombala ogqamile, ukuthamba, okuqinile, okuhle nenhle nezinye izinzuzo. Ishidi lensimbi elingenalutho lisetshenziswa kabanzi emikhakheni eminingi, elingasetshenziswa kumakheshi, kwihardware nakwimishini yasendlini, imishini yasekhishini, amakhabethe, umhlobiso wokwakha, izimpawu zokukhangisa nezidingo zansuku zonke, njll. Inani lemikhiqizo lithuthuka kakhulu, inenzuzo enkulu yokuncintisana emakethe.
Langaphambilini amashidi ensimbi angenasici
Olandelayo: embossed insimbi engagqwali amashidi
Insimbi Engagqwali Enombala Wegolide